अविरल थापा, जेष्ठ १२, २०७५
चोर–चोर मिले भने चोर्ने योजना बनाउन थाल्छन्, सज्जन मिले भने कसरी राम्रो काम गर्ने भन्ने सल्लाह गर्छन् । जँड्याहाका साथी जँड्याहा, जुवाडेका साथी जुवाडे, नेताका साथी नेता, अभिनेताका साथी अभिनेता । मानिसले आफूले गर्ने पेसाका आधारमा पनि संगत गर्नैपर्ने हुन्छ, तर त्यसमा पनि आफ्नो हैसियत अनुसारकोसँग मात्र संगत र हेलमेल बढाउँछ । हरेक पेसामा विभिन्न तह र तप्काका मानिस हुन्छन् । चोरका पनि तह हुन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ १२, २०७५
शोभित बस्नेतको निर्माण तथा निर्देशन रहेको ‘बाबु कान्छा’मा सलोनका साथमा बरिष्ठ कलाकार नीर शाह, सरोज खनाल, राजाराम पौडेल, लय संगौला, करिष्मा श्रेष्ठ, ऋतिक शाही, सम्राट सापकोटा, मञ्जु पौडेल, गीता अधिकारी, रामेश्वर रिजाल, शुशान्त श्रेष्ठ, बिक्रम कंडेल लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
नरेन्द्र रौले, जेष्ठ १२, २०७५
सन् २००३ मा काठमाडौंको एनसिआइटी कलेजमा भर्ना भए । त्यतिबेला उनले प्लान इन्टरनेसनलमा काम पाए । आइटी असिस्टेन्टका रूपमा उनको मासिक तलब थियो १४ हजार रुपैयाँ । त्यही बेला हो, एफवान सफ्ट कम्पनीको व्यवसायिक यात्रा प्रारम्भ भएको । पुरा पढ्नुहोस्
यतिबेला अनमोल चलचित्र क्याप्टेनमा काम गर्दैछन् । क्याप्टेनकी नायिकाका रूपमा प्रियंका एमभी तथा उपासना सिंह ठकूरीले डेब्यु गर्दैछन्, जसमध्ये उपासना चलचित्रमा अभिनय गर्नु अगावै सामाजिक सञ्जालमा हिट छिन् । उनको इन्स्टाग्रामलाई ३९ हजारभन्दा बढीले फलो गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
यसको तुलनामा सोलिड स्टेट ड्राइभ लामो समयसम्म टिक्छ भने राम्रो पर्फमेन्ससमेत दिन्छ । यसले तीव्र गतिमा काम गर्छ । ओभरहिट हुने समस्या कम हुनुका साथै सोलिड स्टेट स्टोरेज हलुका पनि हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा बन्ने चलचित्रका लागि २ करोड पैसा त्यसरी छाप्न आवश्यक नै छैन । अर्को कुरा यति हो भनेर दुरुस्त देखिने गरी छाप्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो ? राजेश हमालको तस्बिर राखेर पनि त छाप्न सकिन्थ्यो । गल्ती गरेको हो, कारबाहीचाहिँ प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम हुनुपर्छ, ढाकछोपको प्रयास नगरियोस माग्नेज्यू । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, जेष्ठ १२, २०७५
अग्रचर्म काट्दा यौन सक्षमतामा पर्ने प्रभावका बारेमा भने पक्का जवाफ पाउन गाह्रो छ । अग्रचर्म काटेपछि शिश्नमुण्डको संवेदनशीलतामा कमी आउने भएकाले यौन सम्पर्कका बेला आनन्द कम हुने कुरा कतिपयले बताउँदै आएका छन् भने कतिपयले यौनसम्पर्क थप आनन्ददायक हुने कुरा बताउँदै आएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
आइतबार सगरमाथा दिवसको अवसर पारेर हङकङमा एभरेस्ट हाइकिङको आयोजना हुँदैछ । हङकङेली नेपालीहरूसँगै विभिन्न देशका वाणिज्यदूत तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसमेत उक्त हाइकिङमा सहभागी हुनेछन् । पुरा पढ्नुहोस्